Ukuvala kukaDell (Ukuvimba = Ukubhloga Okudibeneyo) | Martech Zone
ULwesihlanu, July 14, 2006 NgoLwesibili, ngoJulayi 4, i-2017 Douglas Karr
UDell wethule ukuvaleka kwabo kuleli sonto, I-One2one. Kube nokubhalwa okuningi ngakho kubhulogi be-blog… abanye abantu bayabancoma futhi abanye babaxosha. Anginasiqiniseko sokuthi ngabe kukhona umuntu oselibhalile leli gama okwamanje, kepha ngiyalithanda igama elithi 'Clog' leNkampani noma iBlog Corporate. Ngikungeze njengegama elingaqondakali ku wikipedia. Inkampani Blogs ingaba yisibusiso noma isiqalekiso. Kudinga isu kanye nokuqondanisa kwama-blogger abandakanyekile ukwenza i-Clog:
Kuyafaneleka - ingabe ibhulogi yakho iyayisebenzela le mboni? amaklayenti? amathemba? ukuncintisana?
Ngesikhathi esifanele - lapho kwenzeka okubi noma okuhle, ingabe ibhulogi yakho iyingxenye yecebo elisheshayo lokukhipha igama?
Ukwethembeka - ngaphandle kwemininingwane ye-gory, ngabe ubhekene phambili nabafundi bakho noma uzobeka isibalo kuyo?
Okubalulekile - ingabe kuzosiza ibhizinisi lakho ngokuhamba kwesikhathi?
Ukuvaleka kungazwakala kukubi kancane, lokho kungenhloso. Ngiyethemba ukuthi leli gama lamukelwa emhlabeni wonke, ngoba angiqinisekile kangako ukuthi ukuvimba isu isu elihle lezinkampani. Lokho kusho, angisho ukuthi ukubhuloga kubi ngecebo lenkampani. Ngokuphambene nalokho, ngicabanga ukuthi kumnandi. Kodwa-ke, ngicabanga ukuthi kukhona umehluko ohluke kakhulu phakathi kokubhuloga nokuvimba. Ngokubloga, umuntu ungumnikazi wezwi futhi angaveza imizwa yakhe ngobuqotho ngaphandle kokukhathazeka ngemiphumela. Ukuvimba, ngakolunye uhlangothi, kufanele kube yizwi elihlangene lenkampani. Ihlungiwe. Kufanele kube njalo.
UDell usezitholile ezinye i-flack as izithombe ye-laptop eqhuma eJapan ayizange ibhekiswe kwi-Clog yabo njengoba izindaba zazigijimela i-blogosphere.
Iphutha elikhulu! Kungani lokho kuyiphutha? Kungani ungafuna ukubhekana nezinkinga zomhlaba mhlawumbe abantu abambalwa kuphela abazi ngazo? Ngoba uma ungakwenzi, ingozi ebandakanyekayo inkulu kakhulu.
Njengoba usesha ibhulogi ye-Dell njengamanje, uzothola iLaptop Exploding eduze kwaphezulu kohlu! Zibuze lokhu… njengoba ufunda izihloko ezisematheni ngemiphumela yosesho, uyitholile yini indatshana evela ku-One2one ethakazelisa? Ngabe uyitholile ohlwini?
Ukuthula kungumbulali wokuzethemba kwabathengi. Futhi ngokubhuloga, izinkampani zihlinzeka ngendawo yokuxhumana ngayo ngempumelelo. Lapho ingabonakali zabo blog kuqala, abathengi ukwazi ukuthi akunakwa ngamabomu. Ngenxa yalokhu, ukuvaleka kuthathwa njengokungabalulekile, kungakafiki isikhathi, kungathembeki futhi kuyigugu.
I-VOIP giant Skype kungenzeka ibe elandelayo ohlwini. Muva nje, abanye abathuthukisi e-China bathi babuyisele emuva ukubethela kwe-Skype futhi basebenzise isoftware yabo ukudayela omunye umuntu futhi babazise ikheli labo le-IP. Lokhu kunomthelela omkhulu ku-Skype, okubeka ukubethelwa kwayo embuzweni. Esikhundleni sokuhlasela isimangalo, abakwa-Skype bamane bakuchitha. Lokhu ngeke kube kuhle kubasebenzisi be-intanethi abakhathele. Ngiyazi ukuthi angifuni ukuzibeka engcupheni.
Ngakho-ke, lithini isu lakho lokuvala? Esikhundleni sokukhuluma ngalokho ozimisele ukukuxhumana nabantu (kanye nomncintiswano wakho), uyini hhayi uzimisele ukuxoxa? Yilezo zihloko ezizobuya zizokuluma!
Tags: i-blogosphereukuvimbaibhulogi yebhizinisiDell
Aug 17, 2006 ngo-3: 03 PM
ngiyazi ukuthi i-cheesy kepha ngiyalithanda igama elithi clog.
ngicela wenze i-dougissmart ibe yi-dougissexy?
Aug 17, 2006 ngo-6: 21 PM
i-dougissexy ikhona lapho! Udinga nje ukuphawula kaningi.